Imigomo Yesevisi | Martech Zone
Uma usebenzisa leli sayithi, uyavuma ukuthi uyaziqonda izinqubomgomo zethu futhi uyavumelana nazo.
Leli sayithi ngeke lithweswe icala ngokuqukethwe okudalwe ngumsebenzisi nemisebenzi esakhiweni.
Uyavuma futhi uyavuma ukuthi konke okuqukethwe (umbhalo kanye nemidiya) esidlangalaleni noma esidluliswa ngasese kungumthwalo kuphela womuntu othumela okuqukethwe, hhayi le sayithi.
Leli sayithi linelungelo lokungeza, ukususa noma ukushintsha noma yisiphi isici esakhiweni nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso noma isikweletu.
Unesibopho semisebenzi yakho eku-inthanethi kanye nobumfihlo bemininingwane yakho.
Leli sayithi linelungelo lokususa okuqukethwe okufaka ezinye izivakashi ezithombeni ezingcolile, ubandlululo, ubandlululo, udlame, inzondo, inhlamba, noma okungenanzuzo enkulu.
Leli sayithi linelungelo lokususa izingxoxo ezihlaselayo nezingalungile.
Ugaxekile nokuzinyusa okusobala akubekezelelwa kuleli sayithi futhi kuzosuswa.
Awukwazi ukusebenzisa leli sayithi ukusabalalisa noma ukuthumela izinto ezingekho emthethweni noma imininingwane noma ukuthumela kumasayithi ahlanganyela kulezo zenzo.
Kungumsebenzi wakho ukuhlola noma yimaphi amafayela alandiwe ukuthola amagciwane, ama-trojans, njll.
Unesibopho sezenzo zakho nemisebenzi yaleli sayithi, futhi singavimbela abasebenzisi abaphula imigomo yethu yesevisi.
Unesibopho sokuvikela ikhompyutha yakho. Sincoma ukufaka uhlelo lokuvikela amagciwane oluthembekile.
Leli sayithi lisebenzisa inani le- analytics amathuluzi okuhlaziya izivakashi kanye nomgwaqo. Lolu lwazi lusetshenziselwa ukuthuthukisa okuqukethwe kusayithi.
Konke okuqukethwe okunikezwe kule bhulogi kungenxa yolwazi kuphela. Umnikazi wale bhulogi akenzi izethulo ngokunemba noma ukuphelela kwanoma yiluphi ulwazi olukulesi siza noma okutholwe ngokulandela noma yisiphi isixhumanisi esikulesi siza. Umnikazi ngeke abophezeleke kunoma yimaphi amaphutha noma okweqiwe kulolu lwazi noma ngokutholakala kwalolu lwazi. Umnikazi ngeke abe nesibopho sokulahleka, ukulimala, noma ukulimala okuvela ekubonisweni noma ekusetshenzisweni kwalolu lwazi. Le migomo nemibandela yokusetshenziswa ingashintsha noma kunini futhi ngaphandle kwesaziso.